Ngathi-iGeneham Pharmaceutical Co, Ltd.
Yasekwa ngo-2006, iGeneham Pharmaceutical Co., Ltd.ngumboneleli wesisombululo sokukhupha izityalo zendalo esinamandla kunye namava atyebileyo ophando, ukuphuhlisa, ukulima, ukuvelisa kunye nentengiso, sizinikezele ekuphuhliseni izithako ezisebenzayo zezityalo ngaphakathi kwezongezo zokutya nezondlo. , ukutya kwezempilo kunye nesiselo, izithambiso, izongezo zokutya ze-phytogenic kunye namashishini okunesondlo.
Nge-15years yoxinzelelo kunye nokukhula, i-Genaham iphuhlise umgca opheleleyo wokukhutshwa kwezityalo ezisemgangathweni, kubandakanya:
1. I-antioxidants eluhlaza kunye nekhuselekileyo ekhusela ukutya ngokuchasene ne-oxidation kunye nokwandisa i-shelf Life
2. Uthotho lweeswekile yegazi esempilweni exhasa iimveliso
3. Uthotho lwe testosterone yamadoda yokuphucula kunye nokuxhasa iimveliso
4. Uthotho lwezongezo zokutya kwezilwanyana kunye nabakhuthazi bokukhula kwendalo
Umzi-mveliso wethu wokuqala ubekwe eLiuyang National Biological Industry Complex emalunga neehektare ezili-10; imeko entsha yobugcisa bemigangatho ye-Art GMP ibandakanya imigca emi-3 yokulungisa ukukhutshwa kunye nomgca wokulungiswa kokugqitywa kokwenza, ukudibanisa, ukuhlanganisa kunye nokupakisha. Amandla emveliso yenyanga nganye yiRosemary ekhupha iitoni ezingama-30, igqabi leMulberry ikhupha iitoni ezingama-25 ize imbewu yeFenugreek ikhuphe ii-20tons.
IGeneham inendawo yokulima egubungela iihektare ezingama-2 000, isiseko sethu sokulima eRosemary eHanshou, Changde nephondo laseHubei, kunye nesiseko se-mulberry eXiangxi, kwiphondo laseHunan.
Isiseko sokulima iRosemary
Isiseko sokulima i-Mulberry
Umzi-mveliso wethu ufumene izatifikethi zomgangatho wamazwe aphesheya weKosher, HALAL, FSSC, FAMI-QS, iZatifikethi zeOrganic (i-EOS) kunye nezatifikethi zeOrganic (NOP).